Izindatshana zikaTim Beveridge zivuliwe Martech Zone
Imibhalo nge UTim Beveridge
UTim ungumeluleki wezamasu ohola phambili onolwazi olungaphezu kweminyaka engama-20 esebenza empambanweni yezokumaketha nobuchwepheshe. Enentshisekelo yokushayela okuhlangenwe nakho okungcono kwamakhasimende kanye nemiphumela yebhizinisi enamandla, uTim wajoyina iSilverbullet njengeGM ye Strategic Consulting ngoDisemba 2019.
Ukuqondiswa komongo: Impendulo kuzimo zesikhangiso eziphephile?
Ukukhathazeka kwangasese okwandayo kwanamuhla, kuhambisana nokufa kwekhukhi, kusho ukuthi abathengisi manje badinga ukuletha imikhankaso eyenziwe ngezifiso, ngesikhathi sangempela nangesilinganiso. Okubaluleke kakhulu, badinga ukukhombisa ukuzwelana futhi bethule imiyalezo yabo ezindaweni eziphephe sha. Yilapho kusebenza khona amandla wokukhomba kokuqukethwe. Ukuqondiswa kokuqukethwe kuyindlela yokukhomba izethameli ezifanele usebenzisa amagama angukhiye nezihloko ezitholakala kokuqukethwe okusungulwe kuhlu lwezikhangiso, ezingadingi ikhukhi noma enye
Ukuqondiswa komongo: Ukwakha ukuphepha komkhiqizo ku-Era engaphansi kwamakhukhi
NgoLwesibili, Okthoba 13, 2020 NgoLwesibili, Okthoba 13, 2020 UTim Beveridge
Ukuphepha komkhiqizo kuyisidingo esiphelele kubakhangisi abaya phambili kule ndawo yezepolitiki nakwezomnotho futhi kungenza umehluko ekuhlaleni ebhizinisini. Imikhiqizo manje sekufanele idonse izikhangiso njalo ngoba zivela ezimeni ezingafanele, nabakhangisi abangama-99% bekhathazekile ngezikhangiso zabo ezivela ezindaweni eziphephe sha. Kunesizathu esizwakalayo sokukhathazeka Ucwaningo luye lwabonisa izikhangiso ezibonakala eduze kokuqukethwe okungekuhle okuholela ekunciphisweni kwezikhathi ezingama-2.8